किन खुम्चियो पिसिआर परीक्षणको दायरा ? - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ असार १५ गते ७:२६
काठमाडाैं, १५ असार । देशभर रहेका प्रयोगशालामा निकै न्यून मात्रामा नमुनाहरू आएका कारण परीक्षणको दायरा कम हुँदै गएको पाइएको छ । सरकारले ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड १९’ मापदण्ड बनाएर परीक्षणको दायरालाई खुम्चाउँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितलाई परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न देशभरका सबै कोभिड–१९ अस्पताललाई गत २४ जेठमा निर्देशन दिएको थियो । लक्षण भएका संक्रमितलाई लक्षण देखिन छोडेको तीन तीन दिनभित्र र लक्षण नभएकालाई भर्ना भएको १४ दिनभित्र परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको हो । यो गाइडलाइनले पनि परीक्षणको दायरा खुम्चिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले प्रयोगशालामा नमुना होल्ड नभएको बताए । उनले भने, ‘आएका सबै नमुनाको परीक्षण गरिरहेका छौं । हामीसँग नमुना मौज्दात छैन । प्रयोगशालमा न्यून मात्रामा नमुना आएका छन् ।’
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणका लागि इच्छुक निजी प्रयोगशालालाई गत २२ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये उपत्यकाका नौ र बाहिरका १० वटा प्रयोगशालाले आवेदन भरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । हाल २३ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वटा प्रयोगशाला थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मेची अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, पाल्पा अस्पताल, धौलागिरी अस्पताल, धनकुटा अस्पताल, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल र नेपाली सेना अस्पतालमा प्रयोगशाला थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, अधिकांशमा परीक्षणका लागि तयारी भइरहेको भन्दै परीक्षण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै, परीक्षण दायरा बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले सात वटा अटोमेटेड आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन खरिद गर्ने तयारीमा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको भन्दै परीक्षणको दायरा बढाउने सवालमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले ६१ हजार सात सय ३१ जना क्वारेन्टिनमा छन् । अब कति नागरिक भित्रिन्छन् भन्ने कुराले पनि परीक्षण बढाउने या स्थिर राख्ने निर्धारण गर्छ ।’ प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।